मनकामना माताले सबैको मानोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ २६ गते शनिबार तदानुसार जुन ९ तारीख | imagenepalnews.com
मनकामना माताले सबैको मानोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ २६ गते शनिबार तदानुसार जुन ९ तारीख
June 9, 2018 adminLeaveaComment on मनकामना माताले सबैको मानोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ २६ गते शनिबार तदानुसार जुन ९ तारीख
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल ज्येष्ठ २६ गते शनिबार इश्वी सन् २०१८ जुन ९ तारीख अधिकज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथी प्रातः ०८४१ बजे सम्म पश्चात एकादशी तिथी चन्द्रमा मिन राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
अनावश्यक खर्चको सम्भावना रहेकोछ । मनामा अशान्तिले वास गर्नेछ । अनावश्यक झमेलामा फसिएला । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सावधानि अपनाउनु पर्नेछ । परीवारका सदस्य हरु सगँबाट टाढाँ भएको अनुभव हुनेछ ।
आय आर्जनका श्रोतहरु मनग्य फेला पर्नेछन । बिशिष्ट ब्यक्तिहरुको साथ सहयोग द्वारा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहने योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्नहुन सक्नेछ ।
पारीवारिक साथ सहयोगमा नयाँकार्य थालनिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । सवारी साधनको प्रयोगमा बिशेष सावधानी अपनाउनु उत्तम रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
साथि भाई हरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन ।
सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसाय तथा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ ।
तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन ।
पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ ।
पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन् । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ ।
निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
फेसबुकमा सियर गर्नुस
एक आमाको गुहार : हत्यारा खुल्लम खुल्ला हिडीरहेका छन्, खोइ त न्याय ??
मुक्तिनाथ भगवानले हामी सबैको बाधा अड्चन बाट मुक्ति दिलाई दिउन/ _/\__ : आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ २६ गते शनिबार तदानुसार जुन ९ तारीख
आज मंगलबार मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरौ आजको दिन शुभ मंगल दिन , तपाईको राशिफल
हैट ५ जना मिलेर १ जना लाइ बेस्सरी कुटेको यो भिडियो १८+ ले मात्र हेर्नुहोला